Ajụjụ - Shenzhen Yuebaixiang Technology Co., Ltd.
Poron ụfụfụ Mpempe akwụkwọ
Hot Foil zọ Die
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwe nke kacha nta na-aga n’ihu. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ iregharị mana ọ pere mpe pere mpe, anyị na-akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị.
Anyị na-akwado ihe anyị na ọrụ anyị. Nkwa anyị bụ maka afọ ojuju anyị na ngwaahịa anyị. Na ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu niile nke ndị ahịa na afọ ojuju onye ọ bụla.
Mụtakwuo banyere anyị na ụlọ ọrụ
Azịza nye ajụjụ gbasara nkenke ngwa ọrụ ...
Nghọta nke ebu mma: eme na ...
Ekwentị: (0086) 186-8244-3350
Adreesị: Nke 47, Futang Road, Tangxiachong Community, Yanluo Sub-district, Bao'an District, ShenZhen, Guangdong, China
Ebibi-Drop ịrụzu Rotary Die, Laser anwụ, Ulo Oru enyo enyo, Steel Die osise, Nchekwa onwe-ihe ijuputa osise Die, Nkpuchi Rotary Nwụrụ,